Ku soo dhowow shirkadda!
Muraayadaha muraayadaha Ragga
Muraayadaha indhaha ee xayeysiinta ah
2020 Muraayado iib ah oo kulul
Muraayadaha indhaha ee Kid
7 maalmood usbuucii laga bilaabo 9:00 am ilaa 7:00 pm
Hababka dayactirka muraayadaha indhaha
Kadib iibsashada muraayadaha indhaha, waxaa jira kuwa dhif ah oo fiiro gaar ah u leh dayactirka muraayadaha indhaha. Waxaa laga yaabaa in dadka qaar ay u maleynayaan inaan xirto kaliya xagaagan, dad badana waxay u maleynayaan inay iibsadaan muraayadaha indhaha oo kaliya si looga ilaaliyo shucaaca iyo moodada. Sida muraayadaha kale, ma tixgelin doonaan ...
Sida Loogu Xullo Muraayadaha Qaabka Wejigaaga
Weligaa dhibaato malahan inaad isku daydo inaad ogaato nooca jir ku habboon wejigaaga? Hagaag nasiib baad ku jirtaa! Tilmaamaheena yar, waxaad ku baran doontaa inuu jiro qaab qof walba - waanan kuu sheegi karnaa waxa kugu habboon adiga! Qaab noocee ah ayaan leeyahay? Waxay u badan tahay inaad ...
Ku saabsan Baolai
Zhejiang Baolai Group Co., Ltd. waa shirkad baaxad weyn oo gaar loo leeyahay oo isku dhafan wax soo saarka muraayadaha, cilmi baarista iyo horumarinta, wax soo saarka, iibka, iyo soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha. Shirkaddayadu waxay leedahay saddex wershadood oo ku yaal qaybaha sare ee qoyska, 2 bakhaarro oo ku yaal magaalada ganacsiga, oo ah shisheeye ...